स्वास्थ्यमा रहेका समाचारहरु
विषालु सर्पले टोकेर सात वर्षीया बालिकाको मृत्यु
भद्रपुर, असार २३ – झापा गाउँपालिका–६ स्थित मदरगाछमा विषालु सर्पको टोकाइले सात वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । वैधनाथ गोसाइँकी छोरी निरुतालाई आइतबार राति २ बजे सुतिरहेको अवस्थामा सर्पले टोकेको थियो । सर्पले टोकेको थाहा पाएलगत्तै उनलाई कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई...
डोल्पामा टाइफाइडको प्रकोप बढ्दै
डोल्पा, असार २३ – हिमाली जिल्ला डोल्पामा टाइफाइडका बिरामी दिनप्रतिदिन बढ्न थालेका छन् । प्रत्येक दिन पाँचसम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको जिल्ला अस्पताल डोल्पाले जनाएको छ । एक सातायता टाइफाइडका बिरामी बढ्न थालेपछि जिल्ला अस्पतालका श्यया बिरामीले भरिभराउ...
सप्तरीमा २ सय एचआइभी सङ्क्रमित
सप्तरी, असार २२- एचआइभी सङ्क्रमितमाथि समाजको दृष्टिकोण, लाञ्छना र भेदभावलाई समुदायस्तरबाटै न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एचआइभी सङ्क्रमितमाथि हुने लाञ्छना तथा भेदभाव न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आज राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरोकारवालासँग आयोजित अन्तक्रियायामा जोड दिइएको हो । स्वास्थ्य तथा...
भरतपुर अस्पतालको दुरावस्था ः विरामी बढी , बिशेषज्ञ कम
सूर्यप्रसाद अधिकारी असार २२, चितवन । गत माघदेखि केन्द्रीय अस्पतालको मान्यता पाएको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीको तुलनामा तीन गुणा कम विशेषज्ञ, प्राविधिक रहेको पाईएको छ। दैनिक आउने विरामीको चापसंँगै जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावका कारण यो समस्या देखिएको हो । अस्पतालमा...
रत्ननगरमा मुटुको परीक्षण : डाक्टरले भने-मुटु एउटा मात्रै अंग हो ध्यान दिनुस्
रत्ननगर, २१ असार । लायन्स क्लब अफ चितवन नेशनल पार्कले ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, काठमाडौको सहकार्यमा रत्ननगरको टाँडीमा मुटु सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ परीक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । शिविरको रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनज्युले उदघाटन गर्नुभएको थियो । क्लबका अध्यक्ष निरज श्रेष्ठको...
काठमाडौं महानगरका उपमेयरलाई हृदयघात, नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुँदै
असार २०,काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई हृदयघात भएको छ । बिहीबार राति हृदयघात भएपछि अहिले काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उनको उपचार भईरहेको महानगरपालिकाका १६ नं वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । खड्गीका सहयोगीहरुका अनुसार उनको स्वास्थ्य सुधार हुने क्रममा रहेको छ। बिहीबार राती उनलाई...
प्राडा. प्रमोदकुमार सर्राफ वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कजेलका मिर्गौला विभाग प्रमुख हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गौलाका बिरामी बढ्दै गएको पाइएको छ । मिर्गौलाका बिरामीमध्ये आधाजसोलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापका कारण यो समस्या देखिएको प्राडा. सर्राफ बताउँछन् । खानपान, जीवनशैलीमा...
वनको च्याउ खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान : बिष हुनसक्छ
चितवन, असार २० – मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई ननिचेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार वर्षात् शुरु भएसँगै विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्नेको...
बिरामीको मृत्युपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई कसरी रोक्ने ?
–नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौँ, २० असार : अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीको मृत्युपछि कतिपय अवस्थामा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालका चिकित्सकमाथि लापरवाहीको आरोप लाग्छ । अनि प्रदर्शन र तोडफोडका घटना हुन पुग्छ । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेरै घटना नियन्त्रण लिने अवस्था...
ई–चुरोटले मस्तिष्कको तन्तुलाई नष्ट गर्छ – अध्ययन
असार १९, वासिङ्टन । परम्परागत सूर्ती सेवनको विकल्पमा प्रयोग हुने गरेको ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट)ले पनि स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ई–चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्छ । आई–साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा बयस्क...